Mbola velona ny hira fampieritreretana indray ny atao hoe fahefana nataon’ilay mpanakanto Shilianina Victor Jara na dia elabe taorian’ny namonoana azy aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2015 9:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Español
Hosodoko an-drindrina ho an'i Víctor Jara, natao tamin'ny trano mitondra ny anarany. Barrio Brasil, Santiago, Shily. Sary nozaraina ambany lisansa Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Nandritra ny herinandron’ny 14 septambra no nahatsiarovan'i Shili ny faha42 taona nahafatesan’i Victor Jara, Shilianina mpihira sady mpamoron-kira, maty novonoina nandritra ny fanonganana an'i Salvador Allende sy nitondra ilay mpanao didy jadona Augusto Pinochet teo amin’ny fahefana.
42 taona tamin’ny 15 septambra 2015 lasa teo no namonoana an’i Victor Jara, ny rariny amin'izay !!!
Na dia teo ary ny fandehanan’ny fotoana sy ny fiovaovan’ny rivotra politika tao Shili, dia tsy nety lefy ny fieritreretana ny dikan’ny hirany.
Jara no endrika nanehoana ny gadon-kira Shilianina vaovao, karazan-kira sahy nifanandrina tamin’ireo mpitondra izay mbola miaro ny fomban-tany. Tamin’ireo zavatra noforoniny no niresahany ny ady tao Viet Nam sy ny zava-manjò ireo lehilahy sy vehivavy niasa tao Shily. Ohatra amin’izany ity hiran’i Jara hoe « desalambrar » (tapahantsika ny fefy vy):
Manontany aho ankehitriny
raha tsy nijanona nieritreritra izy ireo
fa anay io tany io fa tsy an’olo-kafa ;
manontany aho raha mbola tsy nieritreritra mihitsy ianareo ao amin’io tany io,
raha antsika ny tanana
Dia nomena antsika izy izany
Notsikerain’i Jara ny zara tsy mitovy tao amin’ny firenena Shilianina, notohanan’i Salvador Allende izay lany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 1970. Nolazaina fa i Allende no governemanta sosialista voalohany voafidy mazava tao ilabolantany andrefana sy tanatin'ny ady mangatsiaka ; nananany ny politika manerana ny firenena sy ny fizarana ny vokatra ka nanana fahavalo maro izy tamin’ireo shilianina sy ireo mpanao politika isan’ny goavana tao Etazonia.
Fiafarana tsy lanin'ny fotoana
Nifarana tampoka ny fitondran’i Allende ny taona 1973 rehefa naongan’i Pinochet teo amin’ny fitondrana tamin’ny alalan’ny fampiasana ny tafika izy. Namono tena i Allende rehefa nanakaiky ny toerana izay nisy azy ny Miaramila. Ny ampitso, nampiarahina niaraka tamin’ny miaramila i Jara tao anaty kianja mitafo iray tao andrefan-tananan’ny Santiago, izay toerana nampijalian’ny miaramila sy namonoana an’ilay mpihira sady mpamoronkira.
Lalina tokoa ny fiantraikan'ny hiran'i Jara momba an'i Shily hany ka isaky ny volana septambra, na Shiliana na tsia dia mahatsiaro azy ao amin'ny media sosialy. Saingy novelomina manokana ny fahalianana amin'ny tantaram-piainan'i Jara tamin'ity taona ity taorian’ny nandidiana ilay miaramila shilianina Pedro Barrientos hiakatra fitsarana tamin'ny Aprily 2015 tao Etazonia fa voampanga ho iray amin'ny nanao ny famonoana, 25 taona taorian'ny fiafaran'ny fitondrana jadona miaramila nataon’i Pinochet.
Araka an'i Barrientos, raha voatana i Jara :
Rehefa fantatry ny miaramila tao anatin’ny kianjan’ny Shily izy dia nosarahina tamin’ny ankamaroan’ireo voafonja, ary napetraka tao anaty efitra fisoloana ankanjo, natao ho toerana fanaovana fanadihadiana izay nisy an’ireo manam-boninahitra nampijaly azy tsy ankiato.
Nampahatsiahy ireny fotoana ireny i Boris Navia, izay voatana niaraka tamin’i Jara, nandritra ny kabary novakiany tamin'ny 2006 :
Tonga ilay sabotsy manan-tantara, ny 15 septambra 1973. Nanodidina ny folak’andro no nahazahoanay vaovao fa afaka ireo namanay vitsivitsy. Very fanantenana, nanomboka nanoratra hoan’ireo vady sy reninay izaha nilaza fa velon’aina. Nangataka taratasy sy penisilihazo tamiko i Victor, ilay nipetraka niaraka taminay. Nakako tao anaty taratasiko izy izay mbola taty amiko ny fonony. Nanomboka nanoratra i Victor, nieritreritra izahay fa ho an’i Joan, ilay vadiny, ny taratasy nosoratany. Dia nanoratra izy ka nanoratra, niakatra ny ainga-panahy. Tampoka teo nisy miaramila roa naka azy tamin’ny herisetra nakany amin’iray tamin’ireo efitra kely fampitana hafatra…
Ny fijoroana vavolombelona izay nataony dia mitantara ny fanararaotana sy ny fampijaliana nahazo an’i Jara sy ny fahitana ny vatana tsy misy aina intsony an’ilay mpihira-mpamoronkira sy ireo voafonja hafa. Nomen'i Navia ny fomba fijeriny izay zavatra tsara avy amin'ilay zava-doza :
Tamin'iny alina farany iny, teo am-pitadiavana singan-taratasy hanoratana, no nahitako tao amin'ny kahieko, tsy taratasy, fa ireo andinin-tononkalo farany nosoratan’i Victor ora vitsivitsy alohan’ny nahafatesany, izay nampitondrainy ny lohateny hoe : « Kianjaben'i Shily». Teo noho eo dia nifanaiky izahay fa hotehirizina ilay tononkalo. Nosokafan’ilay mpanao kiraro ny vodikiraroko ka tao no nafenina ny singan-taratasy roa nahitana ilay tononkalo ; talohan’io dia efa nadikako indroa ilay izy. […] Fa mbola hitan-dry zareo ny tononkalon'i Victor ary fantany tamin’ny alalan’ny fampijaliana ny niavian'ilay tononkalo, nankeo amiko ry zareo ary nitondra ahy teo amin'ny toera-pihazakazahana navadika ho toerana fanaovana famotorana. Izay ny amiko. Nanomboka ny fampijaliana, hanerena ahy hilaza raha mbola misy dika mitovy amin’ilay tononkalo any ho any. […] Inona no tena mahaliana an’ireo fasista amin’ilay tononkalo ? Satria dimy andro talohan’ny fanonganam-panjakana tao Shily, dia voahontsakontsana izao tontolo izao, nampiakam-peo, nanandratra ambony ny endrik'i Salvador Allende sy Victor Jara ary, vokatr’izany, tsy maintsy alevina ireo tononkalom-panoherana.
‘Hira afaka ny hirako’
Raha mahatsiaro ny herisetra, maro tamin’ireo Amerikanina Latinina no tsy afaka ny tsy hanontany tena hoe hatraiza ny fandratran'ny mpihira iray miresaka fiovana ara-piarahamonina ny governemanta iray. Saingy mahery vaika ny hira. Amin'ny fahaizany misintona ny fakan'ny olona sary an-tsaina dia afaka mitondra fanafahana amin’ny karazana faneriterena rehetra izany – vaika mampididoza ireo sarangan'olona mpitondra mifikitra fahefana manoloana ny vahoaka.
Toy izao no nanazavan’ilay filozofy Antonio Negri :
Ny fanafahan-tsakana dia tolona ho amin’ny fahafahana ara-panondroana; fahafahana maneho ny tena maha-anao anao ; dingam-panafahana mankany amin'ny fahazakantena sy fahaiza-manova tena : fahafahana mamaritra izay [tsy ianao mihitsy sy ny] mety hoavinao.
Mahakasika ireo lohahevitra mahaliana ny akamaroan’ny olona manerana an’i Amerikana Latina ny votoatin-kiran'i Jara miresaka fanafahana sy fahefana : ny zon'ny mpiasa, ny fitoviana, ny hasin'ny tany, ny famelomana indray ireo fiteny tao an-toerana. Tsy miresaka adim-pahafahana atrehin'ny mponina isan'andro ihany ny hirany, fa fanasana ny mpihaino hieritreritra ny ankoatran'ny zavamisy toa tsy azo hohozingozonina ihany koa, ho sahy haminavina ny hoavy tsy misy dinam-pitondrana ntaolo.
Nampitahain’i Jara ireo antsoin'ny tsirairay mitady fahafahana ho rohy amin'ny rojo ao amin'ny hirany mitondra ny lohateny hoe Canto Libre (Hira Afaka) :
Ny hirako dia hira afaka
Izay tiana omena
amin'izay mandray ny tanany
Ny hirako dia rojo iray
tsy misy fiandohana na fiafarana
Ary isaky ny rohiny
no mety ahitana ny hiran'ny hafa rehetra.
Velona ny fahatsiarovana an'i Jara
Mety ho nanohintohina lalina ny fitondrana jadon’ Pinochet ny fomba fijerin'i Jara izao tontolo izao, fitondrana nitady filaminana ao anivon'ny hantsana mampisaraka ny vato nasondrotry ny tany amin'ny valala tsy mandady harona. Nanako hatrany ny hafany na dia nandeha ary ny fotoana sy ny sivana, araka i Joan Jara, vadin'ilay mpamoron-kira sady mpihira, filohan'ny fikambanana mpanao asa-soa Victor Jara, nitsangana tamin’ny 1993 :
Tsy nety afaka tao Shily mihitsy Ny fahatsiarovana an’i Victor. Nefa dia nandany ny 20 taona tany an-takonana fa tsapa hatrany ny fisiany. Ireo tanora tsy nahafantatra an’i Victor no namelona ireo fahatsiarovana azy. Talanjona aho raha nahita ny fisian'i Victor ao amin'ireo tanora nandritra ny fitsidihako an’i Shily tamin’ny taompolo 80 : Hainy ny hirany na dia tsy naheno izany tamin’ny onjam-peo aza ry zareo. Mihatra hatrany ny fanampenam-bava, fanamenam-bava mihatra amin'ny fampitam-baovao.
Eny fa na dia ankehitriny aza dia mbola manakoako any amin’ny faritra maro ao Amerika Latina ny hiran’i Jara noho ny talentany mahay mamadika ho hira ny hoavy. Misy ny fotoam-pahatsiarovana azy sy ny hafatra napetrany fanao isan-taona fantatra amin'ny hoe Gitara arivo ho an'i Victor Jara :
Ny nofinofin’i Jara isian'ny rariny bebe kokoa eto an-tany dia anisan'ny harem-bakoka ara-kevitra notadiavin'ireo governemanta mpangeja hovonoina. Amin’ny fahatsiarovana an’i Jara fanao isan-taona, dia manao tamberina ireo Shilianina amin'izay azon'ny fitondrana jadon'i Pinochet norobaina raha azony natao izany — ary manaporofo hoe manavatsava tonga hatraiza ny vaikan'ny hirany.